Real Madrid oo la timid Qorshe Cusub ay ku soo xero galineyso Eden Hazard – Gool FM
Real Madrid oo la timid Qorshe Cusub ay ku soo xero galineyso Eden Hazard
Byare November 6, 2018
(Madrid) 06 Nof 2018. Madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez ayay ka go’an tahay sidii uu kooxdiisa u keeni lahaa Eden Hazard si uu ugu dambeyn badel uga dhigo Cristiano Ronaldo.
Warsidaha Don Balon ayaana iminka warineya in Camaaliqada reer Spain ay diyaar u tahay inay Chelsea u bandhigto xiddig yaraheeda Marco Asensio iyo waliba beeso si ay u hesho xiddiga reer Belgium.
Eden Hazard ayaa ku jira qaab ciyaareed aan innaba caadi ahayn oo wuxuu hogaaminayaa gool dhalinta Premier League balse walaalkii Thorgan Hazard oo horey u soo maray Chelsea ayaa uga digay inuu ku biiro Real Madrid oo uu ku sheegay inay ku jirto waqti jah wareer ah.
Inkastuu Hazard la dhacsan yahay kubbada quruxda badan uu Sarri ku soo kordhiyay Blues misane marna ma qarin riyadiisa ku aadan inuu mar uun u ciyaaro kooxda ka arrimisa gegada Bernabeu.
Sikastaba, uma badna in heshiiskan uu dhici doono bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maadaama tababaraha ku meel gaarka ee Real Madrid Solari uu taageero wayn u yahay Asensio isla markaana u ka biyo diidi doono inuu ka tago kooxda bartanka kal ciyaareedkan.
Mauro Icardi uu isku diyaarinaya inuu Janaayo ka tago Inter Milan...(Kooxduu ku biirayaa??)
Santiago Solari oo soo saaray liiska xidigaha kooxda Real Madrid ee kulanka Viktoria Plzen (Yaa ka maqan yaase kusoo baxay?)